CAN 2019: mpanohana ofisialy ny lalao ny Orange | NewsMada
Fanineniny no hanohana amin’ny fomba ofisialy, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra “Can 2019”, hatao any Egypta, ny orinasan-tserasera, Orange. Raha tsiahivina, mpiara-miombonantoka amin’ny baolina kitra afrikanina, nanomboka ny taona 2008 ny Orange.
Firenena misy ny Orange avokoa ireo 11 amin’ireo 24 tafita amin’ny “Can 2019” ka anisan’izany, i Kameronina, Côte d’Ivoire, RD Kongo, Egypta, Ginea, Ginea Bisao, Madagasikara, Mali, Maraoka, Sénégal ary Tonizia. Araka izany, ho hita amin’ireo kianja hilalaovana ny marika Orange.
Hisy fanentanana, hatao eto Madagasikara sy fifaninanana hahazoana mivahiny any Egypta. Hatao any amin’ireo toerana voatokana izany, miaraka amin’ny fahitalavitra lehibe hanarahana ireo lalao rehetra. Tanjona, ny iainan’ireo mpanjifa ity fetin’ny kitra ity. Hisy koa ny «tournoi orange kitra », hatao any amin’ireo faritra samihafa, hitondra ny anaran’ireo ekipa 24 miatrika ny «Can 2019 », ka hanomboka ny asabotsy 22 jona, ny fifanintsanana.
Hisy koa ny «tournoi », atao amin’ny PES 2019, any amin’ireo firenena isan-tokony, ka hisolo tena ny fireneny avy, ny ho mpandresy, izay hiatrika ny famaranana lehibe «Panafricaine Orange Esport Experiecne», ny 17 sy 18 jolay, any Le Caire Egypta. Ho an’i Madagasikara, hotanterahina ny 15 jona, izao, eny amin’ny Arena Ivandry ny dingana famaranana. Ankoatra ny fivahinianana any Egypta, hijery ny famaranana ity «Can 2019» ity ihany koa io solontenan’i Madagasikara, io.
Tsiahivina fa haharitra hatramin’ny taona 2024, ny ho fanohanan’ny Orange, ny Caf, amin’ity fifaninanana, ity.